Feedingasick baby - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဖြားနာနတေဲ့ ရငျသှေးလေးကို ဘာတှဘေယျလိုကြှေးကွမလဲ?
ကလေးငယျတှဖြေားနာရငျ စိတျအညဈရဆုံးဟာ မမေတှေဖွေဈမှာပါပဲ။ဖြားနလေို့ ခံတှငျးပကျြနတေဲ့ကလေးကို အစာကြှေးရခကျတာ ဘာကြှေးရမှနျးမသိတာ မကြှေးသငျ့တာကြှေးမိမှာတှကွေောငျ့ မမေတေို့ စိုးရိမျပူပနျတတျကွပါတယျ။
ကလေးငယျတျောတျောမြားမြားဟာ နကေောငျးလာပွီဆိုတာနဲ့ ခံတှငျးပွနျလိုကျလာတတျတဲ့အတှကျ နမေကောငျးတဲ့အခိုကျအတနျ့လေးမှာ မမေတေို့အနနေဲ့စိတျရှညျကွံ့ခိုငျဖို့လိုပါတယျ။
ကိုယျပူတာ ဝမျးလြှောတာ နှာရညျယိုအအေးမိတာ စတဲ့ကလေးငယျတှအေဖွဈမြားတဲ့ရောဂါတှမှော ရဓောတျဆုံးရှုံးမှုဟာ မြားတတျပါတယျ။မမေတေို့အနနေဲ့ အရညျမြားမြားဝငျအောငျတိုကျတဲ့နရောမှာ နို့စိုးတဲ့ကလေးငယျဆို နို့မြားမြားစို့စတော ဖွညျ့စှကျစာ သို့မဟုတျ ပုံမှနျအစားအစာစားကြှေးနကေကြလေးတှအေတှကျ သဈသီးဖြျောရညျ ကြဲကြဲတိုကျပေးတာ ဆူပှကျအောငျကြိုခကျြပွီးအအေးခံထားတဲ့ရကေို မြားမြားတိုကျပေးတာတှလေုပျရပါမယျ။ဝမျးလြှောတဲ့ကလေးမြိုးဆိုရငျ ဆရာဝနျညှနျကွားတဲ့အတိုငျး ဓာတျဆားရညျတိုကျနိုငျပါတယျ။
မမေတေို့ရဲ့ တဈနကေို့ ဘာကိုဘယျလောကျကြှေးရမယျဆိုတဲ့ အာဟာရရညျမှနျးခကျြတှေ ခဏမလေို့ကျပါ။ဖြားနာနတေဲ့အခြိနျမှာ ကလေးငယျဟာ ခံတှငျးပကျြနတေဲ့ သူတောငျ့တတဲ့အစာကို မညညျးမညူလုပျကြှေးဖို့ပါပဲ။ဝဒေနာကိုပိုဆိုးစမေယျ့အစားအစာမဟုတျရငျ ဒီအခြိနျမှာကလေးရဲ့အာသီသကို ဦးစားပေးလိုကျပါ။
မမေတေို့ကစိုးရိမျစိတျနဲ့ အတငျးအကွပျကြှေးတတျကွပါတယျ။ကလေးတှလေညျး လူကွီးတှလေိုပဲ ဖြားနတေဲ့အခြိနျမှာ ခံတှငျးပကျြတတျကွပါတယျ။အစာကို နညျးနညျးစီ ခဏခဏခြော့ကြှေးတာမြိုးလုပျသငျ့ပါတယျ။
နှာစေးခြောငျးဆိုးအအေးမိဝဒေနာမြိူးမှာ အရညျမြားမြားတိုကျပါ။ဗီတာမငျ စီပါတဲ့ အသီးအနှံတှေ အစိမျးရောငျဟငျးသီးဟငျးရှကျတှထေညျ့ကြှေးပါ။အမနေို့ကလှဲလို့ နို့နဲ့နို့ထှကျပစ်စညျးတှကေိုမကြှေးသငျ့ပါ။ဒါတှကေခြှဲပိုကပျြစပေါတယျ။ကွကျသှနျဖွူ /နီတှမှော Virus ပိုးတှကေို တိုကျခိုကျနိုငျတဲ့အစှမျးရှိတာကွောငျ့ အစားအသောကျထဲထညျ့ကြှေးသငျ့ပါတယျ။
ဝမျးလြှောတဲ့ကလေးတှဆေို အရညျမြားမြားဝငျအောငျတိုကျရပါမယျ။အဖတျမစားခငျြရငျ အတငျးမကြှေးပါနဲ့။အစာအိမျနဲ့အူလမျးကွောငျးကို သကျတောငျ့သကျသာရှိစမေယျ့ အစာပြော့ပြော့လေးတှကြှေေးနိုငျပါတယျ။သကွားပါတဲ့ အခြိုရညျတှဟော ဝမျးပိုလြှောစလေို့ ရှောငျသငျ့ပါတယျ။
Dr.Pwint Phyo Kyaw
ဖျားနာနေတဲ့ ရင်သွေးလေးကို ဘာတွေဘယ်လိုကျွေးကြမလဲ?
ကလေးငယ်တွေဖျားနာရင် စိတ်အညစ်ရဆုံးဟာ မေမေတွေဖြစ်မှာပါပဲ။ဖျားနေလို့ ခံတွင်းပျက်နေတဲ့ကလေးကို အစာကျွေးရခက်တာ ဘာကျွေးရမှန်းမသိတာ မကျွေးသင့်တာကျွေးမိမှာတွေကြောင့် မေမေတို့ စိုးရိမ်ပူပန်တတ်ကြပါတယ်။
ကလေးငယ်တော်တော်များများဟာ နေကောင်းလာပြီဆိုတာနဲ့ ခံတွင်းပြန်လိုက်လာတတ်တဲ့အတွက် နေမကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာ မေမေတို့အနေနဲ့စိတ်ရှည်ကြံ့ခိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
ကိုယ်ပူတာ ဝမ်းလျှောတာ နှာရည်ယိုအအေးမိတာ စတဲ့ကလေးငယ်တွေအဖြစ်များတဲ့ရောဂါတွေမှာ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုဟာ များတတ်ပါတယ်။မေမေတို့အနေနဲ့ အရည်များများဝင်အောင်တိုက်တဲ့နေရာမှာ နို့စိုးတဲ့ကလေးငယ်ဆို နို့များများစို့စေတာ ဖြည့်စွက်စာ သို့မဟုတ် ပုံမှန်အစားအစာစားကျွေးနေကျကလေးတွေအတွက် သစ်သီးဖျော်ရည် ကျဲကျဲတိုက်ပေးတာ ဆူပွက်အောင်ကျိုချက်ပြီးအအေးခံထားတဲ့ရေကို များများတိုက်ပေးတာတွေလုပ်ရပါမယ်။ဝမ်းလျှောတဲ့ကလေးမျိုးဆိုရင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း ဓာတ်ဆားရည်တိုက်နိုင်ပါတယ်။
မေမေတို့ရဲ့ တစ်နေ့ကို ဘာကိုဘယ်လောက်ကျွေးရမယ်ဆိုတဲ့ အာဟာရရည်မှန်းချက်တွေ ခဏမေ့လိုက်ပါ။ဖျားနာနေတဲ့အချိန်မှာ ကလေးငယ်ဟာ ခံတွင်းပျက်နေတဲ့ သူတောင့်တတဲ့အစာကို မညည်းမညူလုပ်ကျွေးဖို့ပါပဲ။ဝေဒနာကိုပိုဆိုးစေမယ့်အစားအစာမဟုတ်ရင် ဒီအချိန်မှာကလေးရဲ့အာသီသကို ဦးစားပေးလိုက်ပါ။
မေမေတို့ကစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ အတင်းအကြပ်ကျွေးတတ်ကြပါတယ်။ကလေးတွေလည်း လူကြီးတွေလိုပဲ ဖျားနေတဲ့အချိန်မှာ ခံတွင်းပျက်တတ်ကြပါတယ်။အစာကို နည်းနည်းစီ ခဏခဏချော့ကျွေးတာမျိုးလုပ်သင့်ပါတယ်။
နှာစေးချောင်းဆိုးအအေးမိဝေဒနာမျိူးမှာ အရည်များများတိုက်ပါ။ဗီတာမင် စီပါတဲ့ အသီးအနှံတွေ အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေထည့်ကျွေးပါ။အမေနို့ကလွဲလို့ နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကိုမကျွေးသင့်ပါ။ဒါတွေကချွဲပိုကျပ်စေပါတယ်။ကြက်သွန်ဖြူ /နီတွေမှာ Virus ပိုးတွေကို တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတာကြောင့် အစားအသောက်ထဲထည့်ကျွေးသင့်ပါတယ်။
ဝမ်းလျှောတဲ့ကလေးတွေဆို အရည်များများဝင်အောင်တိုက်ရပါမယ်။အဖတ်မစားချင်ရင် အတင်းမကျွေးပါနဲ့။အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းကို သက်တောင့်သက်သာရှိစေမယ့် အစာပျော့ပျော့လေးတွေကျွေးနိုင်ပါတယ်။သကြားပါတဲ့ အချိုရည်တွေဟာ ဝမ်းပိုလျှောစေလို့ ရှောင်သင့်ပါတယ်။
Time and condition of avoiding sex and why?